Alshabaab oo xalay weeraray Janaale iyo Qoryooley oo degan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
23rd March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Qoryooley – Mareeg.com: Alshabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanja Janaale oo gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo ay muddo maamulayeen ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM.
Weerarka Alshabaab ayaa yimid kadib markii shalay Alshabaab dagaal looga saaray degmada Qoryooley oo ay maamulayeen muddo sanad ah.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in xalay deegaanka Janaale laga maqlay hub culus oo ay si weydaarsanayaan ciidamada ku sugnaa halkaas iyo Alshabaab oo weerar ku qaaday.
Dhanka kale, xaaladda degmada Qoryooley ayaa la sheegay iney saaka degantahay, inkasoo xalay mararka qaar la maqlayey rasaas goos goos ah, iyadoo ay halkaas dhufeysyo ka sameysteen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Dagaalkii shalay ka dhacay Qoryooley ayaa sababay dhimashada ilaa 3 qof oo ka tirsan ha lqoys, kuwaasoo madfac kula habsaday gurigooda.
Dhibaato dawo yari ah ayaa ka jirta degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana sida wararku sheegayaan dadkii rayidka ahaa ee dagaalka ku dhaawacmay loo qaaday degmooyinka kale ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Alshabaab ayaa la sheegay iney ku sugan yihiin meel aan ka fogeyn Qoryooley oo ilaa 10 KM u jirta, waxaana halkaas weli ka jira taxadar ciidamadu muujinayaan.
Geesta kale, howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa warsaxaafadeed uu soo saartay ku sheegay in howlgalkii shalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose lagula wareegay degmadii 7-aad ee Alshabaab maamulayeen tan iyo markii howlgalkaani bilowday maalmo ka hor.
Degmada oo 120-km Koonfur-galbeed ka xigta Muqdisho ayay sheegtay AMISOM inay Al-shabaab maamulaysay shantii sano ee lasoo dhaafay, balse maanta ay ka mid noqotay degmooyin dhowr ah oo tan iyo bishii lasoo dhaafay laga qabsaday Al-shabaab.
“Howlgalkan wuxuu hordhac u yahay qorshe lagu doonayo in kooxda Al-shabaab looga saaro degmada xeebta ku taalla ee Baraawe, taasoo ka mid ah degmooyinka ay gobolka Shabeellada Hoose kaga sugan yihiin,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka AMISOM.
Ergayga Midowga Afrika ee Somalia, danjire Maxamed Saalax Anaadiif ayaa ku sheegay warsaxaafadeedka inuu uga hambalyeynayo ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM qabsashada ay qabsadeen degmada Qoryooley, isagoo intaas ku daray in AMISOM ay sii wadi doonto taageerada shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaa ka go’an AMISOM inay sii waddo howlgallada lagu soo celinayo nabadda iyo kala-dambeynta Soomaaliya, si shacabku ay u helaan xorriyad ay ku noolaadaan,” ayuu yiri danjire Anaadiif.